Windows ny devoly, fa maro no mampiasa azy | Avy amin'ny Linux
Windows ny devoly, fa maro no mampiasa azy
pandev92 | | hafa
Eny, rehefa miditra amin'ny tranokala Linux ianao, dia miresaka ratsy momba ny Windows, ny sombintsombiny, ny viriosy ny rehetra, fa ratsy tarehy izy io, fananana sy zavatra hafa an'arivony.
Mahamenatra fa avy eo ireo izay mitaraina any an-danitra momba ny faharatsian'i Windows, ny NSA ary ny fanjakan'ny ratsy, matetika no voalohany (tsy matetika, fa amin'ny ankamaroan'ny tranga) manana boot roa ary mazava ho azy, amin'ity fihatsarambelatsihy lehibe ity, Izy ireo dia afaka mamorona fialantsiny an'arivony, fa raha asa izany, na raha lalao, dia raha ho an'ny Photoshop.
Imbetsaka ireo izay milaza fa noho ny lalao dia mitovy amin'ny forum sy tranokala linux, hoy izy ireo fa raha mitondra ny Dota 2 i Steam dia tsy hampiasa Windows intsony izy ireo (lainga!).
Ny fihatsarambelatsihy izay miaina matetika amin'ity tontolo ity dia tena tsara tokoa, mba hanome ohatra tsara, ireo izay mitaraina amin'ny lanitra momba ny fahazoan-dàlana Windows, avy eo nividy iPad, iPhone na Apple Gadget iray, mampatsiahy ahy ireo olona milaza aminao izay tokony hatao fa tsy manao izany (toy ny ankamaroan'ny olona mpivavaka).
Mangataka ny olona aho mba tsy hivadika, raha mampiasa Windows ianao, azafady, aza tonga hilaza aminay mba tsy hampiasa izany, raha mampiasa Apple Gadget ianao, aza tonga miresaka aminay toy ny Stallmanianina manazava momba ny tombotsoan'ny fahalalahana ary hanasazy antsika amin'ny karavasy LPG.
Ilay lehilahy manana "fanahy" roa dia miovaova amin'ny alehany rehetra hoy ny boky tranainy iray, miaina ary avelao hiaina ary mifanaraka amin'ny zavatra ataonao, aza mangataka amin'ny hafa, izay tsy vitanao akory aza.
Vita, nesoriko ny satroko teo alohan'ireo izay nahavita nanao tsy misy ireo fitaovana fananana rehetra ireo ary mifanaraka amin'ny fihetsik'izy ireo sy ny teniny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Windows ny devoly, fa maro no mampiasa azy
Linux no ampiasaiko, tsy mampiasa windows aho satria marina izany ary tsy milalao aho na raha manandrana fizarana izay be dia be dia efa nandramako 10%
… Velona ary avelao ho velona…
Ireo mpampiasa tsikerainao dia mety hiteny aminao izao, satria zon'izy ireo ny mampiasa izay tadiavin'izy ireo Gadget, na dia mamela azy ireo hanambara aza ny fihatsarambelatsihin'izy ireo any aoriana fa Windows na Apple no devoly. Tsy misaina ve ianao sakaiza?
Na izany na tsy izany dia azoko ny tsikera nataonao ary voalohany indrindra dia manaja ny hevitrao aho. Izaho dia iray amin'ireo mpampiasa nahavita niaina tsy nisy Windows tao amin'ny solosain'izy ireo nandritra ny 7 taona mahery. Any am-piasana aho manana PC misy boot roa ary nahoana no mandainga? Miditra amin'ny Windows aho mba hilalao ny NFS, Hawks sy ny sisa. Tsy manala Windows aho satria ny PC dia avy amin'ny orinasa toa izany ary maninona no asiana Windows piraty iray hafa any aoriana?
Na izany na tsy izany, izay rehetra manao ny amponga tiany amin'ny hodiny.
Martial del Valle dia hoy izy:
Valiny tamin'i Marcial del Valle
Raha ny marina, tsy haiko hoe inona ity lahatsoratra ity, inona no tanjony hamoronana lelafo?
Pandev, hazavao ho ahy amin'izay ... tsy maintsy hoe satria nandany ny maraina tsy natory aho, somary miadana aho anio.
Raha ny fahitana azy dia niatrika trauma izy taorian'ny ady mazava ho azy tamin'ny mpampiasa GNU / Linux mampiasa Windows hahaha.
Saingy ny bilaogy manokana dia natao ho an'ny trauma, sa tsia? 🙂
aragorn dia hoy izy:
Hahaha tena marina, ny lahatsoratra tsy manome zavatra mahasoa hafa ankoatry ny famoahana ny ratra nahazo azy
Mamaly an'i aragorn
Ho tonga inona izy? Tsotra, eto dia fenoina anti-Windows sy fanehoan-kevitra manohitra an'i Apple foana ary avy eo dia hita fa misy saka 4 tsy mampiasa azy, raha hampiasa azy ianao dia aza vonoina ny hafa.
Alecs dia hoy izy:
Manome hevitra momba ny Windows? 🙂
Mamaly an'i Alecs
Satria ny lohahevitra dia tsy misy lohany tahaka ireo izay nametraka tamin'ny fomba mahery ny lobaka Open Source ary avy eo nandehandeha nanontany ny fomba fampiasana ny MS Office amin'ny divay ... (ankoatra ... inona no ifandraisan'ny mpivavaka amin'ny SW maimaim-poana ??) ... ary koa hoy ny tompoko, ratsy daholo ny tendrony farany ... ny raharahako, ohatra, mpankafy ny 2 amin'ireo interface grika ankahalain'ireo cynic radical (Metro avy amin'ny win 8 sy Unity avy any Ubuntu) aho nefa manana fialantsiny betsaka hanohizana ny fampiasana azy ireo ... tiako izy ireo Fitaovana Apple sy ny fomba navelan'i Dada Jobs tamin'izy ireo, indrindra ireo teo ambony latabatra ... Tiako ny lalao video sy ny zavatra hafa ... saingy amin'ny farany tsy manana mac aho ... na mandresy, na ubuntu (tsara, saika) ... mitantana aho miaraka amin'ny studio dell-ko miaraka amin'ny os fototra ... amen hahahaha
Nihevitra aho fa nisy ny fitokonan'ny troll androany, saingy toa niverina niasa izy ireo.
Manana an'i Debian ao an-trano aho, fa eo am-piasana amin'ny solosaina izay tsy ahy dia manana Windows 7 napetraka izay iasako, ao an-trano amin'ny solo-sainako manokana no ialako izany, raha tsy maintsy mody any an-trano aho indraindray raha tsy ' t mety tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mampiasa fitaovana arahin'antoka aho, ny ataoko dia mifandray amin'ny alàlan'ny VPN mankany amin'ny solosaina miasa avy any an-trano sy miasa lavitra.
Ny zavatra iray dia izay tadiavintsika hananana ary ny iray hafa dia ny tokony hananantsika, amin'ny tranga maro dia tsy maintsy mampiasa fitaovana manana ho toy ny lalàna mifehy ny fandraharahana isika, ohatra, ireo rakitra namboarina niaraka tamin'ny LibreOffice dia mifanaraka amin'ny Microsoft Word fa tsy 1005 indrisy.
Pukurin dia hoy izy:
Tsy dia mpankafy vahaolana mifangaro na oviana na oviana aho, satria heveriko fa amin'ny farany dia hiafara amin'ny fatiantoka rehetra ianao ary tsy misy tombony. Vantany vao tafiditra ao amin'ny Linux ianao, dia sahirana be aho mieritreritra ny hampiasa Windows indray. Ary naharitra 3 volana aho vao lasa mpampiasa 'raikitra', rehefa avy nametaka ny solosaiko imbetsaka ary nametraka distro maro. Hitako izao ny mazava ary faly amin'ny Ubuntu aho, haingana sy milamina daholo ary afaka miditra amin'ireo fitaovana mahazatra ilaiko aho. Ekeko fa nilavo lefona tamin'ny lalao AAA aho, saingy tsy manam-potoana amin'izany intsony aho ary afaka mampiasa emulator NDS sy PS2 handevozin'ny fiankinan-doha. Ny fandanjana, na eo aza ny jiro sy ny aloka, dia miabo. Ankehitriny dia afaka milaza am-pitsarana aho fa eny, Linux dia OS tsara kokoa
Valiny tamin'i Pukurin
Ny paositra dia jerena ho an'ny afo mirehitra. Raha ny fahitako azy ny marina dia lahatsoratra iray hafa izay tsy mifanaraka amin'ny lohahevitry ny bilaogy, na dia manaja ny atiny sy ny mpanoratra azy aza aho, ankoatry ny fanekena ny ampahany amin'ny atiny, dia toa tsy endrika sy toerana ilay izy.
rocolc dia hoy izy:
Manana an-trano ny orinasa netbook 3 sy ny birao misy boot roa aho. Raha ny tokony ho izy dia napetrako toy izao raha sanatria mila programa manokana aho, fa rehefa nahita izay hitako tsy ho ela dia avelako miaraka amin'i Magic 4 ireo ekipa roa izay efa eo amin'ny lala-mahitsy. Any am-piasana dia azo atao ny mijery ny Linux hiara-miasa amin'ireo mpizara lavitra, satria mendrika be ny fahazoan-dàlana ary mifanaraka amin'izany ny zavatra ary ho an'ny zavatra ataon'ny mpampiasa mahazatra, ny Linux dia mihoatra ary ampy ho an'ny mpanjifa.
Mamaly an'i rocolc
Elijah RM dia hoy izy:
99% amin'ny fotoana ampiasako ny Linux, tsy manoro hevitra ny hampiasa Windows aho ary manameloka ireo izay manenjika azy, saingy manana boot roa miaraka amin'ny Windows (original) sy Linux aho. Raha ny amiko dia manana Windows aho satria mpamorona rindrambaiko miampita sehatra ary ny lalao sasany dia tsy mandeha amin'ny divay.
Tsy hitako izay misy ny fihatsarambelatsihy, isaky ny manontany ny hevitro aho dia holazaiko azy ireo fa tsy safidy tsara i Windows, ny hampiasa Linux isaky ny azo atao ary hamela Windows ho an'ireo tranga izay tsy misy safidy hafa.
Aza adino fa ny hevitro io, tsy sakramenta ny fampiasana Windows.
Valio amin'i Elías RM
pandev92 Tsy fantatro manokana ianao fa izay nosoratanao fotsiny dia fahamarinana toa ny tempoly ary misoratra anarana amin'ny comma ny soratanao aho. Fohy nefa fohy ny zavatra soratanao ary apetaho eo ny rantsan-tananao.
Miezaka ny hifanaraka amin'ny zavatra soratanao sy amin'ny solosainako aho, na dia mpampiasa novice aza aho dia tsy ampiasain'ny Windows monopolie akory. Miezaka mianatra GNU / Linux aho ary mampiasa ireo fitaovana ireo.
Mitranga ihany koa fa ny solosaina orinasa dia mampiasa mafy izay efa nosedraina sy namboarina ho an'ny Windows ary mazava ho azy, rehefa mividy solosaina ianao dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mividy Windows ary aorian'ny fandoavana lisansa dia tsy olana ny fanariana azy. Noho io antony io rehefa tsy maintsy nividy solosaina aho dia nividy klone ary tsy nanana olana tamin'izany aho. Mino aho fa mifanaraka amin'ny eritreritro ny ampihimamba.
Karazana fampidirana inona ity? Noheveriko fa bilaogy iray momba ny GNU / Linux ity, tsy hitsikerana ny olona amin'izay ataony na tsy ataony.
Mpampiasa Windows sy GNU / Linux aho ary lazaiko foana fa tsy maintsy atao tsy misy Windows araka izay tratra, fa indraindray tsy vitanao izany.
Ary raha misy olona manapa-kevitra ny hanome sosokevitra ny GNU / Linux amin'ny olon-drehetra rehefa mampiasa Windows, aiza ny olana?
Miaina ary avelao ho velona? Tokony hampihatra ny tantara ianao ary tsy hivadika satria ny fihatsarambelatsihinao no manimbolo avy eto. Ny famelana ny hafa hiaina dia midika hoe miala amin'ny asany ka mamela azy ireo hanao izay tiany.
Ny marina dia tsy fantatro ny fomba avelanao hamoaka ireo zavatra ireo. Azoko tsara fa misy mpanoratra samihafa, fa raha mamaky hevitra sy tsikera tsy misy dikany dia efa misy ny fanehoan-kevitra. Manantena aho fa tsy ho lasa matetika io hadalana io satria hataonareo fako ny iray amin'ireo bilaogy vitsivitsy momba ny GNU / Linux amin'ny teny espaniola.
sk2040 dia hoy izy:
Efa "nampiasa" Linux nandritra ny fotoana ela aho, heveriko fa izany no andiany voalohany nampiasa RedHat 5, ary nandany vola be aho nametraka azy io ka tsy nafindroako mandra-pivoakan'i Fedora. Na dia nanana milina Windows misaraka misy lalao foana aza aho dia nampiasain'ny Linux Team hamakivaky sy hanandramana.
rehefa handeha hianatra siansa informatika dia mitovy amin'ny solosaina misy linux (birao), ary solosaina misy varavarankely misy lalao, VS Studio SQL Server, izay no nanontaniany anay tao amin'ny oniversite.
Avy eo rehefa nividy ny solosaina findainy voalohany aho dia nanana windows vista + Ubuntu roa (io irery no niara-niasa tamin'ny wifi tamin'izany) avy eo dia leo be aho ary ny windows vista ihany no niasa.
Rehefa nanomboka niasa tamin'ny rafitra aho dia nampiasa centos tamin'ny serivera, ary Windows no nampiasako ny birao. ny fitoviana tantara taloha ihany 🙁
Amin'ny asako ankehitriny dia mpiara-miasa amin'i Microsoft izahay ka nomen'izy ireo Lumia 800 miaraka amina telefaona finday ary manana milina lenovo e431 misy windows 8.1 aho (talohan'ny nahazoako ny lenovo x200 (kely misy dock, tsy tadidiko ilay maodely marina) misy windows 7). Ny olana dia noho ny isan'ny birao lavitra, 95% amin'ireo dia tambajotra Windows sy Cisco VPN. Izaho dia mampiasa programa Shrew roa voalohany ho an'ny vpn (ho an'ny linux sy OSX ihany koa io 🙂 ary mampifandray vpn mihoatra ny iray izy amin'ny fotoana tsy mampino azy) ny olana dia ny mpanjifa RDP. Mampiasa Terminal Terminal codeplex aho izao. Izany dia tena ilaiko mihitsy. Ny programa dia manana tenimiafin'ny tompony, azoko atao ny mampiditra ny mari-pahaizana rehetra ary rehefa mamorona milina aho dia misafidy ilay mari-pahaizana napetraka teo aloha ary afaka manampy marika amin'ny fifandraisana. Tena ahazoana aina sy valiny milamina tokoa, indrindra rehefa manana vpn maromaro ianao, milina azure, rackspace, amazona. Sns ankoatry ny fampiasana saika ny efijery iray manontolo raha vao esorinao ny menus, ampiasao kiheba mba hivoahana amin'ny birao iray mankany amin'ny birao iray hafa tena milay sy toerana malalaka hiasana.
ny distro tiako indrindra dia ny Fedora, saingy vao haingana aho no nisedra ny Elementary tamin'ny fika roa. Tena tiako ny tontonana manify na zavatra toy izany, ankoatry ny dock somary ahazoana aina. Ny valiny azonao ampiasaina ny efijery feno hiasa dia tena mahazo aina, ny olana dia ny minono ny mpanjifa RDP, ny habetsaky ny toerana ampiasainy amin'ny menus sy takelaka izay tsy misy ilana azy na iza na iza. tsy manana scaling mahay koa izy ireo. Nampiasa vinaingitra, remmine ary ohatrinona ny programa hitako fa tsy misy toa ny terminal. tsy mila milaza momba ny fomba fijery. Mbola misy ny fanamafisana bebe kokoa amin'ny famolavolana ny linux fampiharana, ny minimalism ary ny fampiasa bebe kokoa, izany no mahatonga ahy mieritreritra fa Elementary, na dia kernel taloha aza, maro no aleon'ny olona azy. Na dia mifototra amin'ny Fedora aza dia mety. avy amin'ny zavatra notsapako tamin'ny Fedora 20, farafaharatsiny mba misy ny olona gnome amin'ny alàlan'ny fanesorana bara sy toerana malalaka.
farafaharatsiny izao dia mandray teknolojia vaovao izahay ary tsikelikely dia manambatra mpizara linux bebe kokoa izahay, saingy tian'ny lehibeko i ubuntu sy ny centos-ko ary eo no manomboka ny fifanakalozan-kevitra. amin'izao fotoana izao dia maro ny ekipa manana Centos 😉
Mikasika ilay lahatsoratra, heveriko fa tokony ho tena misy zava-misy izy io, mampiasa izay ahazoana aina sy vonona indrindra.
Valio ny sk2040
Black, tiako ianao, saingy tsy fantatro izay helo tianao hatao amin'ity lahatsoratra ity.
Efa niresaka momba ny kalitaon'ny DL izahay ary nivoaka tamin'ity ianao ... Inona no nitranga? Nanoratra sy nandefa azy hieritreritra ny YOLO ve ianao? Tsy misy, tsy ¬¬
Hahahahaha! .. .. nampihomehy ahy ianao .. xD
Eny, tsy mampiasa na manana Windows aho, Linux sy OS X ihany no ananako
Heveriko fa ny fialan-tsasatra dia ny fampiasana izay mety aminao. Mampiasa ny Gnu / Linux amin'ny zava-drehetra aho afa-tsy ny lalao video satria na misy aza ny etona ary maro ny lalao nifindra monina, mbola ratsy foana ny fanampiana ny AMD sy Nvidia.
Heveriko fa tsy tokony ho mpankafy ny teboka ary hikapoka ny tenanao satria misy mampiasa marika manokana na tsia.
Raha ampitahaina amin'ny "lahatsoratra" toy izao dia apetrako amin'ny teny nalaina satria teny anglisy io, tokony apetrakao eo alohany ny teny hoe hevitra, satria izay no vao nosoratanao.
Na izany na tsy izany dia manaiky anao aho, antilinux eo amin'ny birao aho, fantatrao fa tiako hampiasa azy io amin'ny mpizara sy zavatra toa izany, saingy eo amin'ny birao no halako izany, ary raha mila zavatra ao amin'io rafitra fiasa io aho dia mihazakazaka amin'ny milina virtoaly fotsiny aho. , ary hoy aho, ny mpampiasa rehetra izay mimenomenona fa raha Windows na tsia Windows maninona no tsy hanao toy izany? Tsy misy olona sahirana amin'ny fanaovana azy, sa tsy izany?
desikoder dia hoy izy:
Cocolio tso-po, tsy ekeko, heveriko fa teo amin'ny fiainanao dia nahita birao mirindra tsara ianao, ny zava-mitranga dia ny fahitana ny firaisankina sy ny gnome ny olona, ​​tsy tian'izy ireo izy ireo ary lazain'izy ireo fa ratsy ny linux amin'ny birao. ! Tokony hahita boaty Openbox na Enlightenment iray mirindra ianao! Amin'izao fotoana izao dia mampiasa Openbox aho, saika ny zavatra rehetra ataoko amin'ny hitsin-dàlana fitendry dia manana rindrambaiko linux sy conky aho, ary amin'ny ho avy dia mety mametraka dock / bar na inona aho.
Valiny amin'ny desikoder
Rahalahy, mieritreritra ve ianao fa miteny ho an'ny turnip? hahaha tsia ary, tonony…. Eny, ny Unity dia toa ny fako ratsy indrindra eto an-tany hatreto, ny kanelina sy ny vady dia namaky birao iray izay tsara loatra toa an'i Gnome, izay ilay nampiasako satria toa azo namboarina kokoa izy io ary tsy nisy kopian'ny Windows mora vidy (misy dikanteny ), Nametraka dock, conky, latabatra ary snsetera lava be aho.
Fa maninona no mitsentsitra ambony latabatra? Ny iray, indrindra fa ny mpamily sary dia maharikoriko, tsy lazaina intsony ireo kinova misokatra izay tena nandratra, avy eo tsara ny fanavaozana ary ny hafa tena marary andoha, ny marina dia tsy zakako izany, izany no aleoko mampiasa Windows, tsy nanao izany aho voatery niova endrika nandritra ny taona maro ary mety amiko izany, tsy afaka mitaraina.
1. Tsy nahavaly ny valinteninao aho hamaly ny lahatsoratra lehibe
2. Misy olana manavao? Eny, tsy fantatro ny momba anao, fa ho ahy ny zavatra mampahazo aina indrindra eo amin'ny tontolon'ny linux dia ny hoe, manavao ny zavatra, na ny kernel na ny tontolon'ny birao. Tsy mila misintona misaraka ny programa tsirairay aho ary manavao, izay amin'ny windows dia afaka mitondra anao tolakandro lava sy mandreraka ianao. Raha mijery ireo mpamily sary amin'ny resaka fanavaozana ianao, ohatra, mampiasa ireo nouveau miaraka amin'ny sary nvidia tamin'ny vanim-potoanan'ny Pleistocene aho ary mbola tsy nanana olana tamin'ny fanavaozana ireo mpamily sary, tsy azoko tsara ny tianao holazaina amin'ny hoe manavao
Na izany aza, ekeko fa ny mpamily sary maimaimpoana dia misy tsy fahampiana, saingy mieritreritra ianao fa ny mpamily tompona orinasa dia avy amin'ny orinasa mahalala ny sary toa azy ireo, nefa mbola manome ohatra, nahavita nanao mpamily i nouveau sary iray manao injeniera mivadika amin'ny karatra, izay mila asa be. Io dia toy ny hoe mamorona teknolojia antsoina hoe TOT (Teknoloaly tanteraka tanteraka) aho rahampitso, ary mitaraina momba ireo safidy hafa maimaim-poana aho noho ny tsy fahaizany mifanaraka tanteraka amin'ireo fitaovana ampiasain'ny TOT, nefa tsy manisy fiheverana fa mamela ny ain'izy ireo hatao izy ireo. mivadika injeniera amin'ny gadget miaraka amin'ny TOT hanoratra kinova maimaimpoana ...
Raha ny fahitako azy dia tsy mitondra zavatra tsara ity lahatsoratra ity. Aza adino fa ny mpampiasa ny OS tsy voatonona anarana 😉 dia mpiserasera babo (izahay). Ny tokony hankalazaina dia ny famporisihana ny olona hampiasa ny GNU / Linux (na izay antsointsika hoe tsara indrindra) araka izay azony atao. Ny fampiasana rindrambaiko manana dia tsy tokony ho antony fanamavoana, toa ahy izany.
Ireo mpampiasa manana fenitra roa sosona dia efa nisy hatry ny ela ary mbola hanohy hisy ... tsy mila mamorona lahatsoratra misy an'io karazana io fotsiny fa ho an'ny troll
Mysta dia hoy izy:
Mampalahelo fa tsy afaka mitsambikina mihoatra ny sakana amin'ny birao aho, indrindra any am-piasana, satria nanomboka tamin'izay fotoana izay dia tsy afaka mifanohitra amin'ny ankehitriny ianao, ary nanandrana nitady boky fampianarana hampiasa LibreOffice aho fa tsy mahita boky fampianarana amin'ny teny Espaniôla (angamba misy boky feno ary tsy tratrako izy), fa io fomba fiteny io dia tsy ataoko ho fitsikerana satria raha milaza ianao satria misy ny tsy misy dia tokony hamorona azy ianao, period.
Amin'ity tontolon'ny teknolojia rehetra ity dia heveriko fa tsy mendrika ny fitsikerana sy fitarainana amin'i Windows, tokony hampiasa izay hitany fa mety ny tsirairay, angamba ny GNU Pro no handoro ahy eo amin'ny tsatokazo fa tsy manana feon'ny fieritreretana amin'ny fampiasana rindrambaiko manana trano aho, na dia eo aza ity tontolo ho tsara kokoa raha maimaim-poana ny zava-drehetra. Mampiasa GNU / Linux aho satria tiako izany, tsy noho izy maimaim-poana, ary mahazo aina kokoa amin'ny Linux aho noho ny amin'ny Windows, fa mandra-pahatongan'ny Linux tsy manana toerana ao amin'ny Desktop dia ho safidy tsara indrindra ho an'ity ampihimamba ity fotsiny izy.
Mamaly an'i Mysta
Hitako ny olana amin'ny LibreOffice androany amin'ny fampifanarahana ny endrika doc na docx an'i W., heveriko fa olana tsy misy famoahana be loatra izany, fa ny solony dia ny miala amin'ny rakitra doc sy docx (azonao ekena ny mandefa rakitra PDF na zahao amin'ny tsy fitoviana mifanentana amin'ny LibreOffice). Raha mangataka aminao izy ireo handefa Word, dia mora ny mitodika any amin'ny olona ary milaza amin'izy ireo fa tsy mitantana an'io rindrambaiko io ianao, mamorona azy ireo misaraka ary mandefa PDF ho azy ireo (na dokam-barotra tena tsotra miaraka amina endrika kely raha zavatra tsy dia manandanja loatra). Raha hampiasainao hamoronana ny tatitrao manokana izany ary ampitanao amin'ny PDF, heveriko fa tsy tokony hisy olana amin'ny fampiasana azy io ary hisy boky mihoatra ny iray boky any (manana fanampiana be dia be koa izy io).
Tsy noho ianao troll akory, fa tamin'ity indray mitoraka ity, dia nanao afo fotsiny ianao mba hisarika ny sain'ny troll.
Hatrany am-piandohana dia nilaza aho fa mampiasa ny Windows Vista SP2 Dual-boot miaraka amin'i Debian Wheezy, ary ny ankamaroan'ny fotoana ampiasako ny fizarazaran'i Debian dia mifanaraka tsara amin'ny zavatra ilaiko izany ary tsy manana olana amin'ny fampisehoana aho. Amin'ny lafiny Windows, sahirana aho mampiasa azy io hankafizako ny Netflix ary hiasa miaraka amin'ny fitaovana manana fananana toy ny Adobe suite, CorelDraw, Office 2010 rehefa tsy afaka manokatra ny CV amin'ny fomba mendrika ny LO sy ny Kingsoft Office, izany dia antontan-taratasy. Lahatsoratra OOXML miaraka amin'ny makro, ary ny lalao F2P tsindraindray izay tsy manana seranan-tsambo Linux akory. Mampihomehy, misy fotoana vitsivitsy izay hitodihako amin'ny Windows amin'ny PC-ko ary matetika aho no mijanona amin'ireo PC hafa noho ny fandalinana sy / na ny antony miasa.
Na dia nampalaza ny GNU / Linux aza ny Ubuntu, dia tsy maintsy tsiahivina ihany koa fa noho ny fitomboan'ny isan'ny mpampiasa Ubuntu dia efa misy ny fitomboan'ny seranan-tsoratry ny rindrambaiko tompona ho an'ny Linux ary na i Valve aza dia nanapa-kevitra ny hanohana an'i Linux. eo amin'ny sehatra Steam ary Andamiro, nanomboka ny taona 1999, dia nampiasa Linux tamin'ny lalao arcade nataony.
Na izany na tsy izany, tiako ny efa navoaka tao amin'ny forum ity publication ity, satria eto dia mbola fady ny olana momba ny Dual Boot.
Zavatra iray ihany no holazaiko: tsy mainty na fotsy izao tontolo izao fa volondavenona maro karazana.
Fantatro fa ny pandev92 toy izany, ary eo amin'ny Internet fotsiny izy mba ho mpivaro-tena ary miteraka resabe ary tampoka eo amin'ny tontolon'ny politika manohana ny olona mahantra izay tokony hodoran'i satana toa ny olon'ny PP mankahala 90% avy any Espana, saingy mazava ho azy, bilaogy maimaim-poana sy riffraff ity ka mbola tokony avelanao hanome ny heviny izy.
maso miaraka mandrora .. http://imgur.com/Rgmd5UY
fisainana malala-tsaina! = saina malalaka
Ny tiako holazaina dia mino tanteraka ny openource izy fa efa hitantsika fa tsy misy linux na bsd na mahavita xD tsara izy
D: sivanina ireo tandindona tiako hampiasaina xD be loatra, na tsy ny bsd na (io ve: apetraho eto ny tetikasanao openource)
TPT? Ary inona no ifandraisan'izany amin'ny paositra? fa mino ny openource izy dia tsy nahatonga azy handeha tahaka ny sasany milaza aminy tsy hampiasa Windows ary hihiaka momba azy. Teto ivelany tanteraka. Miverena any amin'ny batcave xd.
Raha ny fahitako azy dia tsy ahitana taratra ny fifanoheran-kevitra izay ahafahantsika miaina isan'andro isan'andro ity lahatsoratra ity. Ohatra, mety leo aho amin'ny fandehanana any am-pianarana na handeha hiasa, hitako fa afaka mianatra bebe kokoa na mahomby kokoa amin'ny faritra hafa aho. Saingy, tsy miraharaha ny zava-misy iainantsika io ary mety ho sarotra tokoa ny manafoana izany amin'ny fiainantsika ary mandray lalana hafa. Angamba vitsivitsy (manomboka izao, ireo manana tombontsoa) no handray ireo sainam-pirenena ary hitsambikina ao anaty dobo, ary tsy misy mahalala raha manana rano izy na tsia.
Adinonao, pandev92, fa misy birao miasa fa tsy afaka mampiasa rindrambaiko maimaimpoana sy toetra teknika hafa izay mahatonga azy tsy afaka ampiasaina. Ohatra iray mazava ny fampiasana ny CAD. Jereo fa na ny mpamorona rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny CAD aza dia milaza aminao fa mbola tsy matotra tsara ny rindrambaik'izy ireo hanatanterahana asa marim-pototra (olana ny fahitana ny antony FreeCAD, iray amin'ireo tetikasa CAD malaza amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, dia mbola ao amin'ny sampana 0 .x, na eo aza ny taona maro be [io olona madio io dia efa afaka mahita antsipirihany ao amin'ny lisansa OpenCascade, ampahany lehibe amin'io programa io]).
Ao amin'ny asa famakafakana ara-teknika mahaliana ahy dia ilaina ny manolotra valiny amin'ireo zavamananaina isan-karazany amin'ny fanjakana, izay tsy manaiky afa-tsy ny valin'ny programa manana (raha tsy misy rindrambaiko afaka manao izany) Ny famoronana iray amin'ireo rindrambaiko ireo dia asa goavana, saingy minoa ahy fa efa mamindra ny adepts an'ny rindrambaiko maimaimpoana isika hamoronana safidy hafa.
Ho fanampin'izany, imbetsaka amin'ny asa ianao no terena hibodo ny fotodrafitrasa voafidy, tsy misy toa ny fametrahana ny rafitry ny fiasao ary afaka miasa ianao. Zavatra sarotra kokoa noho izany izy io. Toy ny amiko, ny ankamaroan'ny fizotrany dia natao ho an'ny Windows ary tsy misy safidy hafa ho an'ny rafitra miasa hafa. Tsotra izany
Farany, adinonao ny milaza fa ny ankamaroan'ny governemanta (99,5%?) Mampiasà rindrambaiko manana ho toy ny fenitra, ka izay tokony hatolotrao dia tsy maintsy araka ny endrika angatahiny. Amin'izany fomba izany dia manery anao amin'ny fomba sasany izy ireo hividy rindrambaiko manana (na ny derivatives an'io ho toy ny mari-pahaizana nomerika), nefa tsy manana safidy hametrahana azy ireo amin'ny sehatra malalaka.
Ho an'ity sy ny zavatra maro hafa, dia toa tsy fialan-tsiny ny fehin-kevitra momba ny asa, indrisy fa tsy maintsy miasa isika mba hananantsika vola vao afaka mivelona nefa tsy misy rendrarendra. Hitako fa tena mahantra ny fandinihanao an'io hevitra io ary antenaiko fa ianao sy ireo mpampiasa hafa izay tsy mahalala ny ampahan'ny asa dia manana antony bebe kokoa momba ny fomba fivezivezan'izao tontolo izao.
Na dia ny fampiasana rindrambaiko tompona trano aza dia toa tsy zava-dehibe amiko ny mamorona eo amin'ny tontolon'ny asa ny firosoana mankany amin'ny rindrambaiko maimaimpoana (hitako fa tsy azo inoana izany amin'ny orinasa lehibe). Ohatra, amin'ny orinasa iasako, heveriko fa isika irery no orinasa (antenaina fa tsy izany) eto amin'ity firenena ity izay tsy maintsy mandefa ny tatitra any amin'ny Fanjakana amin'ny alàlan'ny tatitra (amin'ny PDF) namboarina niaraka tamin'ny LaTeX, mampiasa Inkscape, Python, programa siantifika amin'ny Python sy ny script manokana.
Mino mafy aho fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia fitaovana tena mahery vaika, saingy tsy tokony tsy raharahiantsika ireo asa goavambe izay ataon'ny orinasa manohana ny rindrambaiko manana fananana izay manana tombony amin'ny sehatra samihafa, nefa manantena aho fa voaisa ny androny.
Tsy tiako Windows, mankahala mampiasa azy aho, fa rehefa tsy maintsy ataoko dia tsy misy safidy hafa. Ny hevitra dia ny hitazomana hatrany ilay hevitra fa ny rindrambaiko maimaimpoana no vahaolana tokana ahafahana miaina anaty tontolo somary tsara kokoa. Amin'izany no ahalalanao ny olana ary na ho ela na ho haingana dia hikomy ianao handroso ary handao tanteraka na saika tanteraka ilay safidy tsy mahasambatra anao.
Omeo meday ity lehilahy ity.
Tsy afaka manome anao aho laiks; (
Fantatro fa tsy Disqus ity, fa farafaharatsiny ity rafitra maneho hevitra ity dia tsy mora trolling.
beny_hm dia hoy izy:
Ity no lahatsoratra adaladala indrindra hitako hatramin'izay, taorian'ny fihetsiky ny mpianatra iray hafa amin'ny rafitra mitabataba manohitra winbug nefa tsy nisy nilaza azy akory. Hadalana izany satria na dia mieritreritra ianao fa hisy ny olona mampiasa winbug dia tsy natao ho an'ny fahafinaretana fotsiny izany, fa tsy noho izaho tiako ny mampiasa winbug fa point 1. Toy ny amin'ny rafitra tsy maintsy fantatrao sy hainao ny fampiasana ny rehetra na ny ankamaroan'ny OS misy, ankehitriny ny teboka 2 hafa dia ny ho lasa mpilalao mafy fo, na dia nitady ny fomba hahafahako milalao Battlefield 4 sy lohateny vaovao maro aza aho. Ny lalao video dia tsy azo ampiasaina, tsiro iray izay mifamatotra amin'ny faharatsiana lehibe izay winbug, noho izany ianao »raha tsy manana ireo olana 2 na filàna XNUMX ireo ianao dia aza miteny ho an'ny olon-kafa miady hevitra tsy misy fotony raha tsy fantatrao ny tena toe-javatra iainan'ny olona tsirairay. Noho izany dia Mampiasà winbug aho fa tsy mamporisika azy ary mamporisika ny hampiasa linux! fa maninona satria mety amiko io.
Valio i beny_hm
Ny olona lazainao dia mpandainga fotsiny ary fantatrao ilay fomba fiteny malaza taloha hoe: "ny mpandainga dia hita faingana noho ny mandringa.
Tsy azoko hoe maninona ny olona iray no mividy zavatra amin'i Apple na Microsoft ary avy eo miteny hoe helo izany, iray amin'ny roa na manana olana na adala (mampalahelo fa maro amin'ireo farany).
Manana android x86 napetraka ao amin'ny PC aho 😛
Miresaka zavatra manan-danja izao. Heveriko fa lohahevitra tsara io fa tsy toerana tsara hiresahana azy. Aleo tadidintsika izay noforonina DesdeLinux: ampio ny zaza vao teraka tsy hijaly rehefa mametraka gentoo ... Na zavatra toa izany.
Izay no antony iantsoana azy hoe filozofia openource, mieritreritra izany foana ianao ary manandrana mampihatra azy amin'ny fiainanao.
Linux no ampiasaiko amin'ny zavatra rehetra. ary eny marina izany, te hilalao xd !.
Ny zava-mitranga dia latsaka ao amin'ny faharatsian'ny Evangelizing ny rafitra ny mpanoratra, zavatra iray izay tsy azon'ny mpiara-miasa amiko atao na tsy azony atao amin'ny resaka injenieran'ny rafitra. Na ny lohateny ratsy aza dia mitaky ny fantatro momba ny rafitra, ary ny iray hafa dia tiako ny milalao lalao video vao haingana…. ny zavatra tsy maintsy ampianarinao dia ny fampitsaharana ny fitoriana filazantsara amin'ny fampiroboroboana azy fa tsy midika izany hoe tsy mampiasa na tsy afaka mampiasa na tsy mahay mampiasa ny hafa ianao. DISO! avy amin'ny mpanoratra.
Eny, tso-po aho; Tiako ny GNU / Linux ary ampiasaiko betsaka izy io, saingy avy amin'ilay zavatra nianarako (Design Graphic) dia mila mampiasa rindrambaiko Adobe tompony aho, afaka nianatra nampiasa programa famolavolana maimaimpoana toa INkscape na GIMP fa ny marina dia kamo aho mianatra mianatra. ampiasao izy ireo fa tsy laviko fa mampiasa windows aho, tsy tiako izany, fa anjarako kosa. 🙂 arahaba!
Tantara marina, namako. Tantara tena nitranga.
Ary rahoviana, mandra-pahatongan'ny GIMP, Inkscape ary Scribus tsy manambatra hery hampiroborobo ny fampiasana azy amin'ny toeram-pampianarana?
Dcoy dia hoy izy:
Mamaly an'i Dcoy
Ny marina dia, afaka mampiasa lozisialy Open, Free ary Paid isika. (Aza mahazo Pirated xD foana)
Mifanaraka amin'ny teniko sy ny zavatra nataoko aho, jereo fotsiny: [fanambaràna] Manoratra avy amin'ny Windows 8.1 aho miaraka amina fangatahana tompony maro an'isa ary amin'ny booty roa miaraka amin'ny openSUSE satria tiako izany, na dia tsy mila mampiasa azy io aza aho [/ fanambarana]
Akira kazama dia hoy izy:
Tsy nampiasa Windows nandritra ny fotoana ela aho fa efa nesoriko ilay kapila mafy napetrako teo aminy, avelako ao anaty solo-sainako fotsiny sao dia ilako maika.
Na dia eny aza, manana Office, Photoshop ary League of Legends napetraka amin'ny alàlan'ny divay aho. Ary koa, tsy ny rindrambaiko zanatany napetrako avokoa no maimaim-poana, ohatra, mampiasa Steam, Opera ary Maxthon aho, izay andramako izao.
Valiny ho an'i Akira Kazama
Ivan Gabriel dia hoy izy:
"(Lainga!)" Izay mihitsy!
Efa. teamviewer no hany voatahiry ao amin'ny masiniko. Ary ho an'ny firaketana an-tsoratra dia mihazakazaka amin'ny divay xD
Mahita fiovan'ny fahazarana mahaliana ihany koa aho: ny namana izay tsy nahalala na inona na inona ankoatry ny Window $ (sarin'izy ireo amin'ny kianja ...), manana Ubuntu na Mint in Dual Boot izao, fa ny zavatra tsara indrindra dia ... ny fampiasan'izy ireo!
Miadana, miadana tokoa, fa maro ny distros Linux no miala amin'ireo vondrom-piarahamonina "mahazatra" hahatratra ny mpampiasa tsy dia manana traikefa, ilay manokatra ny browser, ny birao ary ny lalao mahazatra mahazatra. Tsara kosa izany.
Valiny tamin'i Ivan Gabriel
beofox dia hoy izy:
lahatsoratra mahafinaritra (valiny voasoratra avy amin'ny fikandrana)
Mamaly an'i beofox
alina, dia hoy izy:
Ao amin'ny fanaraha-maso ataoko dia misy fantsona maromaro mandefa fahitalavitra fako aho, tianao ve ny handany azy io? Fa mpihatsaravelatsihy aho fa tsy manafoana azy ireo?
Nanana Windows sy Linux tao amin'ny PC aho nandritra ny 9 taona. Raha nanana Linux fotsiny aho, dia tsy hampihena ny fampiasana Windows. Ataoko mazava tsara fa manana safidy tiako kokoa ny fivoriana ao amin'ny Linux.
Valio ny nostuido
xarlieb dia hoy izy:
Mahasosotra ahy ny mahita fa amin'ny lafiny unix misy ny zavatra mitsikera maimaimpoana ny windows ary tsy tonga ao an-tsaiko imbetsaka.
windows tsy rafitra ratsy irery. ho fananana sy ny sisa rehetra izany fa amin'ny maha birao birao azy dia manome izay ilain'ny ankamaroan'ny mpampiasa. manomboka ka mihazakazaha. tototry ny mampakatra putifotos any "feisbuk" ary kely fotsiny ... Mazava ho azy fa izaho sysadmin any am-piasana dia tsy hampiasa windows mihitsy satria tsy misy fitaovana (raha ny fahitako azy).
Mazava ho azy fa tsy matetika aho no mitsirika eo am-baravarankely ary na dia mpampiasa debian tsy mivadika sy falifaly mandritra ny herintaona mahery aza aho dia iray amin'ireo manana dualboot hanana lalao roa fotsiny. izany no mahatonga ahy hazoto mafy hahita izay entin'ny steamos amin'ny tontolon'ny linux.
Mamaly an'i xarlieb
Mitovy amin'ny boot-dual Debian + Windows izahay. Ankoatr'izay, ny fihatsarambelatsihy eo amin'ny tontolon'ny POSIX dia noho ny fanboy Farisianina izay manimba ny faharetantsika.
Longinos Recuero Busts dia hoy izy:
Toy izany koa. Mazava kokoa noho ny rano no nanehoanao azy.
Tiako ny famelabelaranao. Miarahaba anao amin'izany.
Valiny tamin'i Longinos Recuero Bustos
Jordeath dia hoy izy:
Manaiky 100% amin'ny hevitrao aho ...
Valiny tamin'i Jordeath
Hector Quispe dia hoy izy:
Ka raha mpidoroka zava-mahadomelina aho dia tsy afaka miteny amin'ny namako mba tsy hampiasa zava-mahadomelina, na dia ratsy aza, satria manao izany aho? ...
Valiny tamin'i Hector Quispe
Jereo izany, mifandraika daholo ny zava-drehetra, arakaraka ny fijerinao azy. Ary lazaiko aminao fa tiako ny Linux.
Mampiasa ny Windows ao amin'ny birao aho satria nanofa ny solosaina birao izahay, izay manana marika ary miaraka amin'ny Windows amin'ny alàlan'ny default, fa amin'ny mpizara kosa dia mampiasa Ubuntu Server izahay ary eo am-panovana ny Red Hat
Ny orinasa niasako taloha dia mpiara-miasa amin'i Microsoft, ka ny zava-drehetra dia Microsoft Windows daholo (eny, Server 2003 hatramin'ny 2012, System Center Configuration / Data Protection / Operations 2007 sy 2012, ISA Server na TMG, .NET, SQL Server, sns. ). Ary nifototra tamin'ny politika Microsoft daholo izany.
Heveriko fa na manao ahoana na manao ahoana Linux ianao dia tsy maintsy fantatrao ny teknolojia rehetra, raha ny marina ny matihanina amin'ny solosaina dia tsy maintsy mahafantatra ny lafiny roa amin'ny vola madinika, ary amin'ny tranga maro dia tsy manana safidy isika, izay omen'ny client fotsiny, tsy misy ilana azy ny maha-genius Linux raha tsy mahalala na inona na inona momba ny Windows sy ny fomba fiasao, ary ny mifamadika amin'izany.
Manana ny hevitro momba ny tolona Windows vs Linux maharitra mandrakizay aho, fa amin'ny faran'ny andro, ny orinasa tsirairay sy ny olona tsirairay dia mampihatra izay toa tsara indrindra amin'izy ireo, na izay azon'izy ireo ampiharina, avy eo, raha misy orinasa manakarama anao dia tokony tantano tsara amin'izay omeny anao sy ampifanarahiny. Nahita linuxeros tsy nahomby tamin'ny fanamarinana ny rafitra Windows / Microsoft ary ny mifanohitra amin'izany koa
Ary tsara izany ny hevitra hoe sysadmin na developer na eo amin'ny sehatra novolavolanao eo amin'ny tontolon'ny IT.
Tsy afaka mandehandeha ianao ary milaza fa tsy fantatrao fotsiny io na zavatra io, fa ho ahy dia anti-matihanina, +1000.
Azafady mba homena medaly volamena ity mpaneho hevitra ity ho an'ny hevitra tsara indrindra tamin'ny 2014.
Fahafahana GnuLinux dia hoy izy:
Tsy dia tena marina ny avelanao hiaina, tiako ny hanao ny zava-drehetra ao amin'ny Gnu / Linux fa raha tsy avelany hiaina any amin'ny oniversite aho, satria ny rindrambaiko sasany ho an'ny asako dia ho an'ny windows fotsiny, ny zava-misy dia mampiasa boot roa izahay. Satria tsy te-hanana izany ny raharaha, mazava ho azy fa tsy maintsy mampiroborobo rindrambaiko maimaimpoana isika na dia mampiasa windows aza, adidintsika olom-pirenena izany, ary raha mividy takelaka miaraka amin'ny IOS ianao dia tantara iray hafa tena hafa, ny marina Tena tsy ekeko ve ny lahatsoratrao fa izay no momba azy.
Valio amin'i GnuLinuxLibertad
Manaiky tanteraka. Windows ihany koa no ampiasaiko, ary marina fa imbetsaka aho tsy manan-tsafidy (Gamer inveterate aho), ary ekeko fa ny tena ratsy indrindra dia ny Apple…. fa satria "milay" ...
Ds23yTube dia hoy izy:
Malalaka isika rehetra hitsikera izay tadiavintsika ary miaraka amin'izay dia hampiasa izay tiantsika, raha mpampiasa Linux isika, dia tsy hitondra tena tahaka ny Windero, ary midika izany fa tsy manery olona na hitondra olona ho any amin'ny taninao.
Mamaly an'i Ds23yTube
Roly dia hoy izy:
Ho an'ny anjarako ao an-trano ny fotoana tokana nananako boot roa dia ny 2 Kubuntu (tsy tadidiko izay kinova), ny iray satria ilay nilamina no niasa, nilalao sns. Ary ny iray kosa kinova iray izay nanandramana zavatra izay raha notapahako dia mendrika ahy izany! Ny toerana tokana ampiasaiko Windows ary tsy an'ny safidiko irery io fa miasa io!
Tsy tiako ny mihorakoraka amin'ny Windows! (Ataon'i X izany raha tsy izany) Mampiasa GNU / Linux aho amin'ny tombony rehetra omen'ny SL ahy, tiako kokoa ny windows noho ny teboka an'arivony maro hafa! io no atoroko maharitra fa tsy mpankafy ny SL na anti Win.
Raha mikatsaka ny hirindra amin'ny fiainana aho, amin'ny lafiny rehetra ary mazava ho azy, araka ny voalazanao, ny fihatsarambelatsihy dia tsy eo amin'ny fiaraha-monina ihany, fa eo amin'ny haitao ihany koa. Mihobia!
Mamaly an'i Roly
Tsara, olona nahatakatra ilay lahatsoratra, tsy niteny aho na oviana na oviana fa tsy tokony hampiasa windows, ary tsy nilaza koa aho hoe tsy misy 4 na 5 tena mila izany amin'ny asany satria miasa amina orinasam-pirinty na fanontana ataon'ny governemanta (izay tsy izy rehetra, mainka fa ny maro an'isa), fa raha ampiasainao ao an-trano izany, aza mandeha ho toy ny troll lozisialy maimaimpoana, satria tsy misy olona manohana azy.
Chicho dia hoy izy:
Ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra dia avy amin'ny Windows, mitady toerana hahitana azy fotsiny ny olona, ​​afaka miteny izy ireo fa ny Linux no tsara indrindra nefa mbola mampiasa Windows izy ireo ary tsy ratsy izany, efa nilaza i Bender fa "Nanao izany daholo izy ireo, te-ho tian'ny olona fotsiny aho", zavatra io mahazatra ny zanak'olombelona, ​​ary lamaody ny linux hehe, assholes
Mamaly an'i Chicho
ary io kabary io ihany dia averimberina ho an'ny ant-NSA, SOPA ary hadalana hafa ... maro no miantso ny tenany ho mpikomy ary iza no miaro ny nify sy ny hoho misokatra ary manao izany amin'ny OSX sy Windows oO ... fifanoherana aiza?
Raha ny marina, tsy dia miraharaha an'ity lohahevitra ity aho ... afaka nilaza fotsiny aho fa izay tonga hilaza fa ny vahaolana amin'ity rafitra ity dia tsara kokoa noho ilay iray izay matetika ampiasako dia tsy manosika ahy na dia kely aza hifindra any amin'io sehatra io. Raha mieritreritra fandaniam-potoana aho (farafaharatsiny raha ny amiko) hampiasa rafitra fandidiana maro amin'ny solosaina iray ihany. Rehefa mampiasa zavatra toa an'i gnu linux ianao dia tokony hazava tsara ny olana kasainao hamahana amin'ny fampiasa ahy Mino aho fa io zava-misy io no mahatonga ny olona maro hametraka rafitra hafa amin'ny solo-sain'izy ireo izay tsy voatsikera amin'ny farany dia azonao atao amin'ny fiainanao izany. tonga amin'ny faniriana ianao !!
choanm dia hoy izy:
Nampiasa Linux aho ary mifanaraka amin'izany. Sarotra be ve ny manaiky azy? Raha avy amin'ny zavatra hitako ao amin'ireo forum io dia nolazaiko fa Linux sy OSX dia rafitra maro an'isa ary ny mifanohitra amin'izay no izy.
Raha ny fomba elav, "velona ary avelao ho velona" dia tsy mihatra amin'ilay namorona ny lahatsoratra, ny marina dia ireo olona mitsikera ny Windows ho "milay" nefa mampiasa azy, mihatsaravelatsihy, tsara foana ny manome manorina fanakianana momba izany. Ary eny, ny tsirairay dia tokony hamela ny hafa hisafidy izay tadiaviny, fa kosa tsy tokony hihatsaravelatsihy isika fa maro no maniry ny hisimisy mpampiasa bebe kokoa ao amin'ny Linux ary izany no mahatonga ny maro hanandrana mandresy lahatra ny olon-kafa ny soa azon'ny Linux. Izaho dia mampiasa Linux ary Linux irery ihany (amin'izao fotoana izao), fa raha misy fotoana tsy omen'ny Linux ahy izay ilaiko dia nifindra tany amin'ny OS hafa aho, izay nomeny ahy, fe-potoana. Tokony hanome soso-kevitra amin'ny OS isika arak'izay tadiavin'ny mpampiasa hafa fa tsy arak'izay tiantsika.
Hitako fa tsara ny publication nataonao! Lahatsoratra tena tsara.
Valio ny choanm
Tena marina ny momba an'ity lahatsoratra ity, saingy mitranga izany satria, ny "devoly", dia manolotra rindranasa tsotra kokoa hampiasaina amin'ny karazana tranga rehetra, izay tsy misy izany amin'ny Linux. Ao amin'ny Linux hanamboarana zavatra maro na maro an'isa, tsy maintsy manantona ny terminal ianao. Misy fampiharana sary iray na iray hafa, saingy tsy mandeha tsara izy ireo na tsy manao ny zavatra rehetra tokony hataony. Amin'ny alàlan'ny b, mila miala amin'ny terminal foana ianao. Androany, araka ny filazan'ny tanora Lao androany, "dia io." Avelao ireo teny izay mahatsapa ho lehiben'ny solosaina, mitady zavatra hafa ny mpampiasa, eo amin'izy ireo, ny fahatsorana sy ny hafainganana. Misy antony, ny "devoly" no mbola ampiasaina.
geronimo dia hoy izy:
Amin'ny andro Linux manolotra vahaolana EQUAL na SUPERIOR, amin'ny sehatry ny solosaina rehetra, "THE DEVIL" dia manjavona. Saingy, amin'ny taham-pahalehantsika, mieritreritra aho fa tsy hafahafa mihitsy amin'ny Devoly ny Devoly. Fa maninona ... tsy haiko, fa hafahafa be daholo izany rehetra izany. Ny fiainana an-taonany dia manana linux ary mbola tsy mampitovy azy amin'ny devoly akory. Averiko ihany, toa tsy dia hafahafa loatra izany. Inona no any ankoatr'izay, inona no manakana ny Linux tsy hikapoka an'i Windows? Vonona ny handoa fahazoan-dàlana ho an'ny Linux izay manolotra ahy mitovy amin'ny Windows aho, miampy ireo hatsaram-panahy efa ananany, momba ireo farany.
Mamaly an'i geronimo
Ilay teraka Windowslerdo dia ho mandrakizay. Ary tsy menatra izy ireo, mampiseho izany amin'ny "lahatsorany" aza.
Miezaka mafy araka izay vitako aho mba tsy hampiasa rindrambaiko manana. Ary tsy mampiasa Windows mihitsy aho, fa mbola tsy misy mahavariana. Ny zavatra miavaka, na ny tena marina, dia ny fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny fananganana tatitra momba ny bibikely, fanomezana, fanomezana andalana kaody, ary fanatratrarana ny iray amin'ireto telo ireto. Mariho fa ireo no tanjoko, hetahetako, ary tsy te hiteny aminao aho hoe tokony ho toy izany.
Ny zava-dehibe dia ny fanovana ataon'izy ireo.
Ny Vyasa dia hoy izy:
Tsy lahatsoratra ity… Lahatsoratra momba ny hevitra io! Mpampiasa roa aho, fa tsy noho ny fahafinaretana, manamboatra solosaina ary saika ny mpanjifako rehetra dia mampiasa serizy (toraka izany koa, miaraka amin'ny fanesoana sy ny zavatra rehetra). Tsy azoko atao ny mamoy ny fahazarany raha tsy Linux koa no rafitra be mpampiasa indrindra amin'ny solosaina PC sy solosaina findainy (izay antenaiko fa tsy ho ela). Na izany na tsy izany, mampihetsi-po be ny fidirana! Salama.
Valiny tamin'i El Vyasa
Ny maha-zava-dehibe ny fananana Backup ary fitaovana sasany hanatanterahana azy ireo
Macopix: Ahoana no hananana tovovavy virtoaly eo amin'ny biraonao (ArchLinux)